နို့မှုန့်ဖိုးမတတ်နိုင်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြိုးဆွဲချအဆုံးစီရင်သွားတဲ့ ဖခင်ရဲ့ ကျန်ရစ်သူကလေးလေးကို တစ်နှစ်စာနုိ့မှုန့်များလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ - Cele Connections
ခိုင်နှင်းဝေလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ကျိုးကိုစွန့်ပြီး အများအကျိုးအတွက် အားတက်သရောလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးကို မြင်ယောင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေက လက်ရှိကိုဗစ်ကာလမှာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားထားတာကြောင့် ပရဟိတအလုပ်တွေကို ပိုမိုအချိန်ပေးလုပ်ကိုင်ဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့ကမှ သူမရဲ့ ဂေဟာက သမီးလေးတစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေက ဒီကနေ့မှာတော့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သမီးလေးအတွက် ရည်စူးပြီး အလှူတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း အခုလိုပဲ မျှဝေပေးလာပါတယ်။
“ဖခင်ဖြစ်သူမှာ နို့မှုန့်ဖိုး မတတ်နိုင်၍ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြိုးဆွဲချ အဆုံးစီရင်သွားသော ကြောင့်ကျန်ရစ်သူ ဇနီးနှင့် (၃)လသားလေးအား အမျိုးသမီးချင်း ,သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဖြင့် နို မှုန့် တစ်နှစ်စာအား ကျွန်မရဲ့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သမီးလေးအား ရည်စူး၍ လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ယနေ့ ပြုသမျှ ကုသိုလ်များအားလုံးအား သမီးလေး ရရှိ စံစားနိူင်ပါစေ ရှင်…အမျှ အမျှ အမျှ…. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼” ဆိုပြီး နို့မှုန့်ဖိုးမတတ်နိုင်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြိုးဆွဲချအဆုံးစီရင်သွားတဲ့ ဖခင်ရဲ့ ကျန်ရစ်သူကလေးလေးကို တစ်နှစ်စာနုိ့မှုန့်များလှူဒါန်းပေးခဲ့ကြောင်း သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခိုင်နှင်းဝေက ဒီနေ့လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ကလေးလေးရဲ့ ဖခင်က စီးပွားရေးကြပ်တည်းလွန်းတာကြောင့် မိခင် နို့မှုန့်သွားဝယ်နေတုန်းအချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးလေးရဲ့ ဖခင်လည်း သူ့ရဲ့သားလေးအတွက် ရောက်ရာဘဝကနေ ဝမ်းသာနေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
နို့မှုနျ့ဖိုးမတတျနိုငျလို့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ကွိုးဆှဲခအြဆုံးစီရငျသှားတဲ့ ဖခငျရဲ့ ကနျြရဈသူကလေးလေးကို တဈနှဈစာနုိ့မှုနျ့မြားလှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ
ခိုငျနှငျးဝလေို့ ဆိုလိုကျတာနဲ့ ကိုယျကြိုးကိုစှနျ့ပွီး အမြားအကြိုးအတှကျ အားတကျသရောလုပျဆောငျနတေဲ့ အမြိုးသမီးကို မွငျယောငျကွမယျ ထငျပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝကေ လကျရှိကိုဗဈကာလမှာ အနုပညာအလုပျတှကေို ရပျနားထားတာကွောငျ့ ပရဟိတအလုပျတှကေို ပိုမိုအခြိနျပေးလုပျကိုငျဖွဈနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ အောကျတိုဘာလ (၇) ရကျနကေ့မှ သူမရဲ့ ဂဟောက သမီးလေးတဈယောကျကို ဆုံးရှုံးလိုကျရတဲ့ ခိုငျနှငျးဝကေ ဒီကနမှေ့ာတော့ ကှယျလှနျသှားတဲ့ သမီးလေးအတှကျ ရညျစူးပွီး အလှူတဈခုပွုလုပျခဲ့ကွောငျး အခုလိုပဲ မြှဝပေေးလာပါတယျ။
“ဖခငျဖွဈသူမှာ နို့မှုနျ့ဖိုး မတတျနိုငျ၍ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ကွိုးဆှဲခြ အဆုံးစီရငျသှားသော ကွောငျ့ ကနျြရဈသူ ဇနီးနှငျ့ (၃)လသားလေးအား အမြိုးသမီးခငျြး ,သားသမီးခငျြး ကိုယျခငျြးစာစိတျဖွငျ့ နို မှုနျ့ တဈနှဈစာအား ကြှနျမရဲ့ ကှယျလှနျသှားတဲ့ သမီးလေးအား ရညျစူး၍ လှူဒါနျးပေးခဲ့ပါတယျရှငျ။ ယနေ့ ပွုသမြှ ကုသိုလျမြားအားလုံးအား သမီးလေး ရရှိ စံစားနိူငျပါစေ ရှငျ…အမြှ အမြှ အမြှ…. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼” ဆိုပွီး နို့မှုနျ့ဖိုးမတတျနိုငျလို့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ကွိုးဆှဲခအြဆုံးစီရငျသှားတဲ့ ဖခငျရဲ့ ကနျြရဈသူကလေးလေးကို တဈနှဈစာနုိ့မှုနျ့မြားလှူဒါနျးပေးခဲ့ကွောငျး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ မြှဝပေေးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ခိုငျနှငျးဝကေ ဒီနလှေူ့ဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ ကလေးလေးရဲ့ ဖခငျက စီးပှားရေးကွပျတညျးလှနျးတာကွောငျ့ မိခငျ နို့မှုနျ့သှားဝယျနတေုနျးအခြိနျမှာ ကိုယျ့ကိုကိုယျ အဆုံးစီရငျသှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ကလေးလေးရဲ့ ဖခငျလညျး သူ့ရဲ့သားလေးအတှကျ ရောကျရာဘဝကနေ ဝမျးသာနမေယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။